Himalaya Dainik » श्रीमती भनेकाे युवा अवस्थाका प्रियसी, वयस्कका सहयात्री र वृद्ध अवस्थाका नर्स हुन् !
हामीले जीवन बदल्ने केहि भनाइहरू प्रस्तुत गरेका छाैँ
-ज्ञान नै शक्ति हो ।
-आसा एक राम्रो नास्ता हो तर खरा’ब रात्रीभोज ।
-कहिलेकाँही ख’राब व्यक्तिले असल सुझाव दिन सक्दछ ।
-एक विद्वान व्यक्तिले आफूले भेट्टाएको भन्दा बढी अवसरहरू सृजना गर्दछ ।
– श्रीमती भनेकाे युवा अवस्थाका प्रियसी, वयस्क अवस्थाका सहयात्री र वृद्ध अवस्थाका नर्स हुन् ।
-क्षणहरूमा उब्जेका विचारहरू लेखी राख, तिनीहरू जुन अकस्मात् आएका हुन्छन्, महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
-यात्रा, युवावस्थामा, शिक्षाको एक भाग हो भने वयस्क अवस्थामा अनुभवको एक भाग ।
-केही पुस्तकहरू चाख्नका लागि हुन्छन्, केही पुस्तकहरू निल्नका लागि र थोरै मात्र पुस्तकहरू च’पाउन र पचाउनका लागि हुन्छन् ।
यो पनि- कसरी खुशी मिल्छ ?
खुशी हुन कसलाई रहर हुदैन र वास्तबमा सबैको जीवनको एउटा साझा उदेश्य नै खुशी र सुखी हुनु नै हुन्छ । जिन्दगीमा खुशी र दुख आधा आधा हुन्छ भनिन्छ तर हामी खुशी हुनु भन्दा पनि धेरै दुखि भइरहेका हुन्छौ । कहिले दुख आइ पर्छ त कहिलेकाही हामी खुशी हुन नै जान्दनौ र साना साना कुरामै दुखी भइदिन्छौ । कार्य गर्दै जादा असफलता प्राप्त हुनु एक सामान्य कुरा हो तर हामी असफल एकचोटि हुन्छौ अनि त्यो असफलतामा धेरै पटक दुखी भइदिन्छौ । जीवनमा आइ पर्ने उतार चढावलाइ सहर्ष स्वीकारेर सकारात्मक सोचको साथ निरन्तर अघि बढ्नु नै खुशी हुने सरल तरिका हो ।
– सकारात्मक मानसिकता सिर्जना गर्नु ।
आफुसँग भएको चीजहरूको लागि कृतज्ञ हुनुले तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न सक्दछ। यसले तपाईंको लागि राम्रो के छ , त्यसमा फोकस गर्न मद्दत गर्दछ रआफ्नो जीवनको बारेमा सोचेर नि’राश हुनबाट रोक्दछ । जीवनमा जे कुरा मिलेको छ त्यो कुरालाई स्वीकार गरि पाएका कुराको लागि आभारी हुनु पर्दछ । जहिले आफु संग नभएका कुराहरुको वारे सोच्नाले मानिसलाई दुखी बनाउछ ।
– नकारात्मक विचारलाइ सकारात्मक बनाउनुहोस्।
मानिस दुखी हुनुको सबै भन्दा ठुलो कारण दिमागमा नकरात्मक सोच आउनु हो । नकरात्मक विचारहरूले खुशी महसुस गर्नमा बा’धा पुर्याउन सक्छन तर तपाईं ति बिचारहरूलाई कुनै पनि बेला परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । आफुले गरेका कतिपय गल्तिहरू छन् भने आफैले आफुलाइ माफी दिनुपर्छ । नकारात्मक विचारलाइ सकारात्मक बनाउने, मानौं तपाईंमा यस्तो सोच आयो कि “म एकदम कु’रूप छु।” तपाईले यस बिचारलाई बदल्न सक्नुहुन्छ, “म कु’रूप छैन किनकी सबै मानिस आ -आफ्नो तरिकाले सुन्दर छन, म मा नि केही चीज छ जो सुन्दर छ ” वा “म अद्वितीय छु, र यसले मलाई सुन्दर बनाउँछ।
-आफैले आफ्नो तारिफ गर्नुहोस ।
आफुले गरेको राम्रो काम र सफलताको लागि आफुलाई नै प्रशंसा गर्नु पनि खुशी हुने अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो यसो गर्नाले तपाईलाई आफु सहि बाटोमा हिडिरहेको छु भन्ने भान त हुन्छ नै साथै आफैबाट अझ राम्रो गर्ने र अघि बढ्ने प्रेरणा पनि मिल्दछ ।
– आफुलाई अरुसंग तुलना गर्न छोड्नुहोस ।
हामी दुखी हुनुमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने यो अर्को ठुलो कारण हो । अरु संग त्यो छ तर म संग छैन भनेर चिन्ता लिनु नै दुख निम्त्याउनु हो । सबैजना आ-आफ्नो यात्रामा छन्, त्यसैले अरुको उपलब्धि हेरेर आफ्नो प्रगति मापन गर्नु अनुचित हुन्छ । अन्य व्यक्तिले के गरिरहेका छन् भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्। यसको सट्टामा, आफू विगतमा भएको ठाउँमा तुलना गर्नुहोस्। यसले तपाईंको कति र कसरी प्रगति भइरहेको छ हेर्न मद्दत गर्दछ ।
– जे मन पर्छ त्यो गर्नुहोस ।– आफ्नो कला र क्षमताको पहिचान ।
यदि तपाइमा गीत गाउने कला छ भने गायनलाइ नै आफ्नो काम बनाउनुहोस नाच्न मन पर्छ र नाच्ने क्षमता छ भनेर नाचेर नै खुशी हुने प्रयत्न गर्नुहोस । धेरैको इच्छ्या एक तिर अनि कार्य अर्को तिर हुनाले पनि मानिसलाई दुखी बनाइरहेको हुन्छ ।
– अनुभव बटुल्नमा पैसा खर्च गर्नुहोस ।
आफुले चाहेको सामान किन्नु पनि निकै रमाईलो हुन्छ , तर यसले चिरस्थायी खुशी दिन सक्दैन । सामानहरु किन्नमा भन्दा घुम्न ,मुभी हेर्न केहि नयाँ चिजको अनुभव गर्न पैसा प्रयोग गर्नुहोस् । अधिक रमाइलोको लागि, तपाईंलाइ मन पर्ने , ख्याल राख्ने व्यक्तिहरूसँग घुम्न या केहि चाख लाग्दो कुरा गर्नमा पैसा खर्च गर्नुहोस ।
सुन्दा सामान्य लागे पनि यो अभ्यासको पूर्ण रूपमा पालना गर्न भने निकै गाह्रो छ। एक हप्ताका लागि पूर्णरूपमा आठ घण्टासम्म सुत्नुपर्ने हुन्छ। सुन्दा असहज जस्तो लागे पनि पर्याप्त मात्रामा सुत्नाले डि’प्रेसन जस्तो रो’गबाट बच्न र सकारात्मक दृष्टिकोण वृद्धि गर्नका लागि समेत सहयोग गर्छ।
– ध्यान गर्ने
तपाईँ कम्तीमा १० मिनेट ध्यान बस्नुपर्ने हुन्छ। खुशी भएर बाच्नेहरु ध्यान बस्नाले दिमागलाइ आनन्द मिल्ने र नकारात्मक सोचबाट मुक्ति मिल्ने बताउँछन्।
-परिवार र साथीसँग धेरै समय बिताउने
खुशी हुने तरिका सम्बन्धि भएका अनुसन्धानहरूका अनुसार परिवार र साथीहरूसँग धेरै समय बिताउँदा थप खुशी हुन सघाउ पुग्छ। स्वस्थ, पारस्परिक र सामाजिक सम्बन्ध हुनुले तपाईँको भलाइ गर्छ।
यसो गर्न त्यति गाह्रो छैन। ”हरेक पल बाच्नूस् र आफ्नो समय कसरी बिताउने भन्नेबारे सजग रहनुस्,” तपाईँको खुशीका लागि समयको अवधारणा निकै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले प्रायःजसो धन भन्नाले हामीसँग कति पैसा छ भन्ने कुरासँग जोडेर हेर्ने गर्छौँ तर विभिन्न अनुसन्धानले के बताउँछ भने धन आफूसँग कति समय छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ।